Kwete garrett pro pointer China Manufacturer
Tsanangudzo:Metal Detector Pro,Garrett Pro Pointer,Detector De Oro
Home > Products > Walk Through Metal Detector > Door Frame Metal Detector > Kwete garrett pro pointer
Mafambiro esimbi anogadziriswa nehugandanga, uko kune hugandanga ipapo iyo misika ichava mune simba guru. Zvakafanana nemucheka mutsvuku uye mukoti, vanogona kudzivisa hugandanga kuti huitwe. Uye uchengetedze hupenyu hwevanhu nezvinhu. Doo inofamba nesimbi detector, Jeri rinofamba nesimbi detector.
● Chiratidzo cheAlarm: Chiratidzo chikuru chema LED, chakakwirira semuviri womunhu, chinogona kuratidza nzvimbo yeA alarm zvakananga, kunyatsoratidza nzvimbo yechinhu chakacherechedza, uye inogona kumira pamusana pese inzwi uye chiedza chechiedza, pakarepo, kunatsiridza zvikuru yebasa. famba musimbi detector.
● Kugadziriswa kwekunzwisisika kwenzvimbo: senzwi guru rinokwanisa kuona simbi sediki sebhuku rekipi. Haisi chete nzvimbo yekutaridzika imwechete inokwana senitivity grading, asiwo huwandu hwekunzwisisa hunogadziridzwa mukati mekubata zana, iyo inoona 100 * 100 kusarudza kwekunzwisisa. Door Frame Metal Detector.
● Unyanzvi hwekugadzirisa zvakasiyana-siyana: kwete chete inogona kuona kugadzirisa bhuku, asiwo inogona kuita kuti ione guru guru rakagadziriswa nechinhu chakarambidzwa kuburikidza nekugadzirisa kunzwisisika kwegedhi rekuchengetedza mumagadzirirwo ayo arimo menyu. Checkpoint Metal Detector, famba-kuburikidza nesimbi detector, arched metal detector.
Metal Detector Pro Garrett Pro Pointer Detector De Oro Metal Detector Probe Metal Detector Project Metal Detector Parts Metal Detectors Parts Metal Detector Zone